Indostria sy fandraharahana: hananganana “Tahiry fiantohana” | NewsMada
Indostria sy fandraharahana: hananganana “Tahiry fiantohana”
Mandalo fotoan-tsarotra, hatramin’izao, ny indostria malagasy amin’ny ankapobeny. Nampahafantatra sy nanolotra vahaolana ho an’io sehatra iray io ny minisitra Randrianarisoa Guy Rivo, nandritra ny fankalazana ny Andron’ny indostria aty Afrika, ny 20 novambra teo.
Mbola marefo ny indostria noho ny fahamaroan’ny ivelan’ny ara-dalàna (informel), ny kolikoly. Ahitana izany ny fampidirana entana an-tsokosoko mamono ny vokatra eto an-toerana. “400.000 isan-taona anefa ny tanora tonga eo amin’ny tsenan’asa, tsy misy afa-tsy 2 % ny manana fahafahana manangana orinasa madinika sy salantsalany na PME. Ireo karazana orinasa ireo anefa tsy ahafahana manana toekarena matanjaka ho fampandrosoana ny eto an-toerana”, hoy ny minisitry ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina, Randrianarisoa Guy Rivo.
Manoloana ireo olana ireo, naroson’ny minisitera ny vahaolana hananganana “Tahiry fiantohana” any amin’ny banky ho an’ireo manana tetikasa. Sakana iray lehibe hatramin’izay ny fahazoana famatsiam-bola. Vahaolana iray hafa, ny fampijoroana “Foibe ho an’ny fampandrosoana ny indostria”, fiaraha-miasan’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Faritana ho lalàna ireo mialoha ny fitondrana vaovao, raha ny nambaran’ny minisitra.
Ao anatin’ny fankalazana ny Andron’ny indostria izany, orinasa 120 manao fampisehoana manoloana ny Lapan’ny tanàna, eo Analakely, hatramin’ny 24 novambra. Voizina amin’izany ny fanomezan-danja ny “Vita malagasy”, handresen-dahatra ny mpanjifa. Nambaran’ny mpandraharaha iray fa fomba hoentina miady amin’ny fahamaroan’ireo entana avy any ivelany izany, nefa tsy vitsy amin’ireny efa lany andro manimba ny indostria malagasy. Ny kolikoly any anivon’ny fanjakana mampisavovona ireny entana ireny, amidy mora, zakan’ny fahefa-mividin’ny mpanjifa maro eto an-toerana.